Friday March 20, 2020 - 21:02:25 in Wararka by Mustaf Xuseen
Howlgalkaani oo ahaa mid qorsheeyasan ayaa ujeedkiisu ahaa bur-burinta goobaha ay kudhuumaaleeysanjireen maleeshiyaadka argagixisada al-shaab islamarkaasna ay kuqarsanjireen xoolaha ay kasoo dhacaan shacabka jubada hoose. Hoagalka oo ay sameeyeen ur
Howlgalkaani oo ahaa mid qorsheeyasan ayaa ujeedkiisu ahaa bur-burinta goobaha ay kudhuumaaleeysanjireen maleeshiyaadka argagixisada al-shaab islamarkaasna ay kuqarsanjireen xoolaha ay kasoo dhacaan shacabka jubada hoose. Hoagalka oo ay sameeyeen ururka 5aad guutada 16aad kumaandooska xoogga dalka ee danab ayaa waxaa cagta lagu mariyay goobihii al-shabaab ay kudhuumaaleeysanayeen oo kuyaalay degaanada Buulaxaji Lagta_Canole Lagta_Argam oo katirsan gobolka jubada hoose.
Taliyaha ururka 5aad guutada 16aad kumandooska xoogga dalka ee danab G/le Xasan Aadan Ciraaqi ayaa Idaacadda Ciidamadda Qalabka Sida usheegay in howlgalka intii ay kuguda jireen ay kudileen 7 maleeshiyaad ah islamarkaasna aykasoo furteen hubkii ay wateen.
G/le Ciraaqi ayaa intaasi kudaray shacabka degaanada ay howlgalka kasameeyeen inay kamuuqatay xaalada nololeed oo aad uliidato islamarkaasna ay siiyeen xoogga raashiin iyo biyo ah.